Indlu yaseQuaint Cottage, igadi yangasese kunye nepatio
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKitty
Upholile oneminyaka eyi-100 ubudala kunye nobuntu obuninzi. Umsebenzi wokuqala wokusila kodwa uninzi lwendlu luhlaziyiwe. Kufuphi neRock River yokuzonwabisa, izindlu zekofu, iindawo ezithengisa utywala kunye neeresityu.
Olu luhlu luyindlu epheleleyo kunye nendlu yangasemva. Amagumbi okulala ama-3, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela, ikhitshi, iibhafu ezi-1 1/2, kunye ne-2 yangaphandle yepatiyo enegrill kunye nesetingi ye-10.
I-TV ene-I-Netflix, I-Amazon Prime Video, I-Roku
Kufuphi neHairy Cow Brewery, indawo yebhiya enkulu kunye nepizza enedesika ejonge uMlambo iRock. Kufuphi neevenkile zekofu, iimyuziyam kunye neendawo zokutyela. Ukuhamba umgama ukuya emilanjeni kwi-kayaking okanye ukonwabela nje umbono. Iimayile zebhayisekile kunye neendlela zokuhamba kumgama nje omde.
Umbuki zindwendwe ngu- Kitty
I live bicoastal and this home is my base when I am in Illinois. I am a health enthusiast, super aware of toxins in our environment, our food and products hence I am pretty eco~conscious. My surroundings are as simple if not sparse.
Ndikufuphi okanye ndifikeleleka ngefowuni okanye ngetekisi nangaliphi na ixesha.